UGU DAMBAYN: Jordan Henderson Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Liverpool - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaUGU DAMBAYN: Jordan Henderson Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Liverpool
UGU DAMBAYN: Jordan Henderson Oo Heshiis Cusub U Saxeexay Liverpool
August 31, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa ugu dambayn meesha ka saaray hadal-hayntii ka taagnayd mustaqbalkiisa, waxaanu qalinka ku duugay heshiis cusub oo afar sannadood ah oo uu kusii joogayo Anfield.
Liverpool oo hore heshiisyo cusub oo waqti dheer ah uga saxeexday Van Dijk, Alisson, Robertson, Fabinho iyo Alexander-Arnold ayaa waxay muddo sugaysay Jordan Henderson oo wada-hadallo aad u adkaa ay dhex-mareen, kaas oo ugu dambayn ogolaaday inuu qandaraaska kordhiyo.
Henderson oo Liverpool ay sannadkii 2011 kala soo wareegtay Sunderland ayaa waxa uu qalinka ku duugay heshiis soconaya illaa xagaaga 2025, kaas oo meesha ka saaraya walaacii ka taagnaa qandaraaskiisa.
Horraantii xagaagan ayay Liverpool ka walwaltay inay waayayso kabtankeeda iyadoo ay jireen warar sheegaya in Atletico Madrid iyo Paris Saint-Germain ay doonayaan xilli ay Arsenal kusoo baxday kooxaha sida dhow ula socday xaaladdiisa.
Jordan Henderson oo la hadlay website-ka Liverpool kaddib markii uu heshiiska saxeexay, waxa uu yidhi: “Sharaf iyo karaamo ayay ii tahay inaan safarkayga halkan kasii wado. Waa wax cajiib ah in ugu dambayn aanu taa samaynay iyo in aanu diiradda saarno inaanu hore u socono. Dabcan meel ka duwan ayaan juoogaa shaqsi ahaan iyo ciyaartoy ahaanba markii ugu horreysay ee aan halkan imid. Wax badan ayaan bartay, in badan ayaanan ku koray halkan, waxaanan u mahacelinayaa dadkaa.”
Mohamed Salah ayaa hadda ah ciyaartoyga ay Liverpool awoodda iskugu geynayso sidii ay heshiis cusub uga saxeexi lahayd, iyadoo sidoo kalena ay Sadio Mane iyo Roberto Firmino gelayaan labadii sannadood ee ugu dambeeyey qandaraaskood. Sidaas oo kalena waxa ah Oxlade-Chamberlain iyo Naby Keita.